Sọpụrụ 9X Pro nyocha, na-enweghị Google, mana ike nke ihe niile. | Gam akporosis
Taa, anyị na-ekwu okwu banyere ngwaọrụ echere anya. Ọ bụghị mbụ ama si Honor ike na anyị nwere ihu ọma na-anwale. Na Sọpụrụ 9X Pro Ọ na-ebute ụfọdụ atụmanya n'aka akụkụ buru ibu nke ndị ọrụ nke etiti etiti. Ezigbo ama ama zuru oke, nke dị ugbu a na nke ahụ mara mma ma maa mma.
Ikwu okwu banyere nsọpụrụ, dịka anyị siri mara, na-ekwu maka Huawei. Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị mụtara na Huawei eruola otu nke kachasị ndị na-ere ekwentị ekwentị kacha mma. Ihe dị ịrịba ama nke na-enweghị onye ọ bụla ga-abanye na ya mgbe mgbochi nke nchịkwa ụda, mana nke a gosipụtara dị ka eziokwu.
1 A "n'elu" ama maka ihe na-erughị ka ị chere
2 Unbonxing Sọpụrụ 9X Pro
3 Chepụta ọtụtụ àgwà
3.1 The Honor 9X Pro, bụ ezigbo ihuenyo niile
3.2 Mkpisiaka agụ na n'akụkụ
4 Nnukwu ihuenyo maka nnukwu ama
5 Anyị na-ele anya na Honor 9X Pro
5.1 Nchekwa na ike mapụtara
6 Igwe foto na foto na Honor 9X Pro
6.1 Ihe mmetụta nke Honor 9x Pro:
7 The Sọpụrụ 9X Pro si Pop Up n'ihu igwefoto
8 Ihe atụ dị iche iche nke foto
8.3 Foto dị ala
9 Ngwa igwefoto dị nsọpụrụ, dị mma ma na arụ ọrụ
10 Ndị a na-akpọ Achilles ya ikiri ụkwụ
11 Nche na akpọchi
12 Nsọpụrụ = Huawei = Enweghị Google
13 Sọpụrụ Isiokwu Nkọwapụta 9X Pro
14 Uru na ọghọm nke Honor 9X Pro
15 Uche ederede
A "n'elu" ama maka ihe na-erughị ka ị chere
Mgbe anyị na-achọ ekwentị arụmọrụ anyị kwesịrị ịmara na nke a, dị ka iwu zuru oke, na-esonyere a onu ahia. Ya mere, na Honor jikwaa si na ngwaọrụ ndị ọzọ. Dị ka anyị ga-agwa gị n'okpuru, ndị Sọpụrụ 9X Pro naanị nwere ọnụahịa dị n'etiti, na ihe ọ na-enye dị anya site na ihe anyị na-ahụ na ekwentị ndị ọzọ.
? Want chọrọ zụta Honor 9X Pro na ọnụahịa kacha mma? Pịa ebe a iji zụta ya
Anyị enyochaworị ọtụtụ ngwaọrụ anyị ga-ekewa na "mpaghara dị n'okpuru" anyị nwere ike ịkpọ adịchaghị n'etiti. Honor 9X Pro bu uzo di anya site na ufodu smartphones di na etiti nke na-adighi nma site na otutu ihe. Ma ọ bụ ezie na nso na nso, anyị na-aghọta na ha ka kwesịrị ete n'ubu na ndị kasị nanị nso.
Anyị na-amasị ịhụ otú enwere ebe etiti uzo di anya na adighi ihe puta ihe na oru. Ngalaba ahịa nke na-aga n'ihu na-agbanwe ma na-emeziwanye onye ọ bụla ọhụrụ, nke ahụ na-eme ka anyị nwekwuo nhọrọ anyị nwere ihe tozuru etozu n’emefughi nnukwu ego.
Unbonxing Sọpụrụ 9X Pro
Dị ka oge niile, anyị na-enyocha ihe niile anyị hụrụ n'ime igbe nke Honor 9X Pro ọhụrụ. Na nke mbu, anyi nwere igwe n’onwe ya, nke n’ile ya anya na mbu karie ka aturu anya, mana mgbe ijidesi ya aka, odi nkpa ma sie ike. Anyị chọtara data na eriri USB, na usoro USB Cdị C.
Na mgbakwunye, anyị nwere Chaja ikike, ihe ruo ugbu a bụ ihe bụ isi, mana ọ dị ka ọ gaghị adị anya. Enweela ụfọdụ ndị nrụpụta anaghị etinye chaja, ọ dịkwa ka ọtụtụ ndị ọzọ ga-esonye na omume a na-enweghị mmasị na ya.
Nsọpụrụ na-esonye na ụlọ ọrụ ndị agbakwunyere ịgbakwunye ihe mkpuchi maka ngwaọrụ ha. Na nke a ọ bụ uwe uzo silicone Nke ahụ nwere oghere buru ibu n'elu iji mee ka ngagharị nke igwefoto n'ihu elu ya, ma anyị nwere ngwa maka ọtụtụ ndị ọzọ, dịka ekweisi ụfọdụ, ihe nnabata.
Chepụta ọtụtụ àgwà
ya ọtụtụ nkọwa na-adọta uche nke imewe nke a Honor 9X Pro. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akụkụ niile anyị na-ahụ ụfọdụ isi na-apụta ma ọ bụ na-ejikwa ọdịiche dị iche na ndị ọzọ. Site na nnukwu notch free ihuenyo onye na-enweta otu ndekọ n'ihu ọrụ. Igwefoto gị n'etiti kwụpụta, ma ọ dịghị ihe ọzọ n'ihi ọchịchọ ịmata ihe, n'ihu igwefoto. Ruo n'azụ wuru ya ihe na-egbuke egbuke na-ekepụta udiri anya.
Ọ dị mgbagwoju anya na ngwaọrụ na-achịkwa iji ghara ịhụ ya na nke ọ bụla n'ime akụkụ ya. Na Honor 9X Pro emeela ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam. Anyị ga-elebanye anya na nhazi ya na akụkụ nke "anatomy" ha na-ejikwa mee ya. smartphone dị iche na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị chọrọ nnukwu ama, zụta Honor 9X Pro ugbu a maka obere ihe karịa ka ị tụrụ anya ya.
Anyị hụrụ ya n'ihu a n'ezie nnukwu ihuenyo. Anyị na-ekwu okwu banyere otu panel na diagonal nke ruru 6,59 sentimita. Ihe na-eme anyị anya n’ezie nnukwu ama ama. Positive akụkụ ọ bụrụ na-amasị anyị nnukwu ákwà ebe ọ dị mma ile vidiyo. Ma gịnị ga-abụ -agaghị ekwe omume iji aghụghọ iji otu aka.
The Honor 9X Pro, bụ ezigbo ihuenyo niile
N'ikwu okwu banyere Honor 9X Pro, anyị nwere ike imecha kwuo na anyị na-eche ihu ihe niile na ihuenyo ama. Iji igwefoto selfie bu "Pop Up" na eme ogwe dị ka 92% nwere. Ihuenyo LCD / IPS with Full HD + 2.340 x 1.080 mkpebi na-enye onyinye 391 pikselụ kwa inch. Obi abụọ adịghị ya na ihuenyo nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ngwaọrụ nke nwere nzube egwuregwu dị egwu.
La okpuru ihe jupụtara na ya. Essentialfọdụ dị mkpa na ndị ọzọ anyị hụrụ n'anya ịhụ na Sọpụrụ na-aga n'ihu "ịkwanyere" ùgwù. Anyị na-achọta USB Type-C format Nchaji njikọ, igwe okwu, ihe otu okwu nke o ji gua ma a 3,5mm mini jack audio input port. You nwere ike ijikọ ekweisi gị na mbụ, ma ọ bụ jikọọ mkpanaka gị na ọkà okwu okenye ma ọ bụ ụgbọ ala na-enweghị mkpa Bluetooth.
Na-ele anya na nke ya Aka nri, na mgbakwunye na ndị ochie njikwa olu, anyị na-ahụ ọzọ nzọ iji tinye mkpisiaka agụ n'ebe a. Anyị nwere ike ịnwale ya na Xiaomi Redmi Rịba ama 9 Pro nyochaa, na nke bụ eziokwu bụ na anyị masịrị ya. Dị ka anyị kwuru n'oge ahụ, afọ ụfọdụ gara aga anyị nwere ike ịhụ nnwale nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ rụụrụ anyị ọrụ. Ma olee mgbe onye na-agụ ihe ngwa ngwa ma dị irè, ọ bụ n'ezie ala.
Mkpisiaka agụ na n'akụkụ
O yiri ka ọtụtụ ndị nrụpụta na-ahọrọ itinye ndị na-agụ mkpịsị aka ha n'akụkụ aka nri. N'akụkụ ebe Ijide ekwentị site na iji aka nri anyị ga-akwado isi mkpịsị aka. N’oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mfe “ejiji” ma ọ bụ bụrụ ihe na-ewu ewu. Eziokwu bụ na ịghara ịbanye na ya akụkụ azụ mkpisiaka agụ bụ ọ bụ ihe "dị ọcha" Nke ọcha.
El n'akụkụ aka ekpe nke Honor 9X Pro a bụ uzo zuru oke ebe ọ bụ na ọbụna SIM na kaadị ebe nchekwa kaadị dị n'elu. Na ilele elu nke ama a anyị hụrụ otu n'ime ihe ndị na-adọta uche kachasị. Na igwefoto selfie na oru “Pop Up” Ọ bụ ezigbo ngafe. Usoro nke nwere ndị nkatọ na ndị na-akwado ya. Ma banyere nke anyị na-enweghị ike ịgọnahụ na ọ bụ "Original" na-adọrọ anya.
Naanị ihe anyị ga - eme bụ ịhọrọ igwefoto selfie n'ihu ka ị hụ etu o si esere na-egosi n’elu ngwa ọrụ ahụ ọfụma. Anyị ga-eburu n’uche na igwefoto a abụghị naanị nke mbụ na Ọ nwere usoro nke na-eme ka ọ zoo mgbe anyị na-ejighị ya. O nwekwara mkpebi nke 16 Megapixels awade ukporo àgwà site a n'ihu igwefoto, na itinye uche nke 2.2.
Nwere ike ịzụta ugbu a Sọpụrụ 9X Pro ke ukara website na nke kacha mma price
Nnukwu ihuenyo maka nnukwu ama
Anyị amalitela ịkọwa Honor 9X Pro dị ka a ama nnukwu na size. Anyị ahụkwala otu ekele maka iji igwefoto ya n'ihu ya yana sistemụ Pop Up anyị nwere niile n'ihu panel dị maka ngosi elu. Ọ bụrụ na nke a anyị tinye a pasent nke ọrụ, dị ka anyị kwuru, nke ruru magburu onwe 92%, ọ bụ ihe ezi uche dị na anyị nwere a nnukwu ihuenyo.
Kpọmkwem, anyị nwere LCD / IPS panel nke ruru 6.59 sentimita asatọ. N'oge na-adịbeghị anya, ekwentị ihuenyo 5-inch bụ ezigbo mma, ọbụlagodi na mbụ o yiri ka ọ buru ibu. Ugbu a, anyị na-ahụ otu anyị si abịaru nso sentimita asaa. Ọ bụ ezie na ngwaọrụ ndị a na-apụghị izere ezere na-eto na nha, ekele maka iji ihu ọma eme ihe, nke a bụ ekwe omume n’enweghi ekwentị.
Ahụmịhe onye ọrụ ahụ dị ezigbo mma. Nnukwu ihuenyo na ezigbo mkpebi ọ bụ ihe ndị na-achọ ngwaọrụ na-arịwanye elu na akaụntụ. Anyị nwere mkpebi 2.340 x 1.080 Full HD + na 391 dpi. Dị ka anyị kọwara na mmalite, ọ bụ otu n'ime ngosipụta ole na ole na ahịa taa o nweghi akara. Capacitive multi ihuenyo mmetụ, borderless na na iko gbara gburugburu 2.5.
Na mpempe, a na ihuenyo zuru oke maka ịnụ ụtọ vidiyo, foto ma ọ bụ egwuregwu. Ahụmahụ nke inwe igwefoto dị mma na-emeziwanye mgbe anyị nwere ihuenyo dị mma nke nwere ike igosipụta agba n'ụzọ dị adị. Nke a bụ ihe atụ doro anya nke igwefoto dị mma na ezigbo ihuenyo.
Anyị na-ele anya na Honor 9X Pro
Dịka anyị na-agwa gị site na mbido post, Honor a enweela ike ịpụ, maka otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ, n'akụkụ niile n'okpuru nyocha. Ngwa nhazi ya na ibe ya abụghịkwa otu. Ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka Honor, n'ụzọ ezi uche dị na ya anyi nwere igwe ihe eji eme Kirin, na nke a, otu na pụtara pụrụ ịdabere na ezigbo mma utịp.
Anyị nwere Kirin 810, mgbawa eji na Honor ngwaọrụ, ma na nke Huawei Mate 30 Lite, na Huawei P40 Lite ha na-agbachitere onwe ha n'ụzọ dị ebube. A ARM V8 CPU nke nwere Cortex A76 na 2,27 GHz + Cortex A55 na 1,88 GHz. Asatọ cores na elekere ugboro nke 2.27 GHz.
Nke a, enweghị ọrụ na Honor 9X Pro a nwere ike ịtụ egwu. Anyị enweela ike ịhụ etu na otutu ngwa na-arụ ọrụ n’okirikiri ka na-azaghachi nke ọma. Bụ ọbụna ike nke na-akpụ akpụ egwuregwu na arọ ndịna, na-ahụghị ụdị nkwụsịtụ ọ bụla, nke nwere ike ịbụ ihe kwere nghọta, nzaghachi dị elu na-enye ihe niile o nwere. NA ezigbo ihe ngosi aka na aka ya Mali G52 MP6 GPU.
Anyị ga-eme ka data enwetara na nyocha ndị a ma ama nke Antutu site na 9X Pro. achingbịakwute ruo Ihe 298.561, arụmọrụ karịa 88% nke ngwaọrụ niile emeela ule ahụ. Ọ bụ ama ị na-achọ, nri? Nweta Honor 9X Pro gị ugbu a ke ukara website na nke kacha mma price.
Nchekwa na ike mapụtara
Ebe nchekwa agaghị abụ nsogbu na Honor 9X Pro. Anyị nwere ebe nchekwa dị n'ime 256 GB, nke enwere ike ịgbatị kaadị akwụmụgwọ micro SD ebe nchekwa. Otu isi ọwụwa na ngwaọrụ ndị ọzọ, na-enweghị ohere, n'ọnọdụ a ga-enye anyị ohere ịnwe ọ takingụ ịse foto na vidiyo na udo nke uche inwe ohere ịchekwa.
Ike gị 8GB Ram a na-ahụta ya na nkwụsị nke ọ na-eche ọrụ ọ bụla ihu na mmiri nke ọrụ ya. E nwere ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche nke ka na-eji 2 GB Ram, ma ọdịiche a bụ ihe anyị chọpụtara na arụ ọrụ kwa ụbọchị na nhazi ọsọ.
Igwe foto na foto na Honor 9X Pro
Dị ka anyị kwurula, ngalaba foto fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ kachasị mkpa mgbe ịzụrụ ekwentị ọhụrụ. Netwọk mmekọrịta na-abụkarị ụta maka "mkpa" igwefoto dị mma. Anyị nwere ike ịgabiga site na batrị etinyere, ya na onye na-akwado usoro nhazi, ọbụlagodi na iji ngwa anabatara, mana anyị kwesịrị inwe ezigbo foto.
Honor 9X Pro, dị ka ọ dị na akụkụ ndị ọzọ, pụtara na ngalaba foto, ọ bụrụ na anyị jiri ya na ngwaọrụ ndị ọzọ dị na otu. Na azụ anyị na-ahụ a igwefoto atọ Nime nke anyị kọwara n'uju ihe anyị nwere n'okpuru. Na otu n'ihu igwefoto na Pop Up usoro nke ahụ jisiri ike dọta uche nke ndị niile na-enwebeghị ike ịnwale ya.
Na nke a anyị na-ahụ a igwefoto modul na aligns na anya m kwụ ọtọ Ọ dị n'akụkụ aka ekpe nke azụ nke ngwaọrụ ahụ. Formatdị nke anyị hụburu na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ, yana na ọkwa ọkwa anaghị agbakwunye ihe ọhụụ. Ọ naghị ese okwu ma ọ bụ na ọ jọ njọ, mana ọ bụ ihe na-anaghị adọta ndị mmadụ ọzọ. Dị n'okpuru bụ Ikanam flash nke anyị nwere ike ikwu na ọ na-akwado ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya.
Ihe mmetụta nke Honor 9x Pro:
Isi ihe mmetụta ọkọlọtọ na mkpebi nke 48 megapixels mere site Sony, kpọmkwem na IMX582 Exmor RS ụdị CMOS. Nwere oghere 1.8 gbadoro anya na nke nke 1 / 2.25 ihe mmetụta.
Wide n'akuku anya na mkpebi nke 8 megapixels nwere ogologo oge.
Omimi mmetụta na mkpebi nke 2 megapixels maka Eserese mode na 2.4 oghere uzo.
Anyị nwere otu igwefoto n'ikpeazụ na-agbachitere nke ọma n'ihe niile. Na-enyekwa mgbakwunye dị ka akụkụ sara mbara na mmetụta miri emi. Akụkụ nke ngwaọrụ ndị ọzọ nwere ike ịnye site na sọftụwia, Honor na-arara anya m abụọ naanị maka nke a.
Ọtụtụ n'ime obi ụtọ ahụmịhe Ihe anyị nwetara na ese foto nke Honor 9X Pro a ha dabere nke ukwuu na nnukwu ihuenyo ha na mkpebi ya magburu onwe ya. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị ga-ekwu nke ahụ, dịka anyị hụworo na Xiaomi Redmi Rịba ama 9 Pro, ngalaba igwefoto dị n'etiti etiti anaghị akwụsị itolite ma na-agbanwe na ụdị ọhụrụ anyị nwere ike ịnwale.
The Sọpụrụ 9X Pro si Pop Up n'ihu igwefoto
Ewezuga ogo nke igwefoto azụ na-enye anyị, n'ihe banyere mkpebi, ịdị mma na nkwụsị, anyị nwere ihe mmezi na ngwaọrụ ndị ọzọ na-ahụghị. Bụ agaghị ekwe omume ịkwụsị ikwu okwu na igwefoto n'ihu nke Honor 9X Pro. Anyị kwesịrị họrọ igwefoto dị n'ihu ka usoro ahụ rụọ ọrụ wee gbapụta Igwefoto onwe. A ubé iji nwayọọ usoro karịa ma ọ bụrụ na anyị na-agbanwe site n'azụ ka n'ihu igwefoto na ngwaọrụ ọ bụla, ma ọ dịghị ihe na-emenye egwu ebe ọ dịruru sonso a abụọ.
Igwefoto n'ihu nwere a 16MP mkpebi, karịa ihe anyị nwere ike ịtụ anya na igwefoto selfie nke ngwaọrụ ọ bụla. Anyị na-ahụ, jiri nwayọ nwayọ dị ka anyị kwuru, mgbe ị na-arụ ọrụ n'ihu igwefoto, ma anyị na-enweta ihu doro anya karị na ihuenyo buru ibu.
Anyị na-enweta foto selfie nwere ezigbo mma mgbe anyị nwere ezi eke ìhè ọnọdụ. Agba na ụdị dị mma. Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike iji ihu eserese were igwefoto dị n’ihu, ihe ngwaọrụ ndị ọzọ anaghị ekwe. Anyị nwedịrị ike ịgbanye foto n'ihu igwefoto n'ihu Usoro HDR, nke na-eme ka oganihu dị ukwuu na njide ejiri ụfọdụ ụkọ na agba ma ọ bụ nkọwa.
Ihe atụ dị iche iche nke foto
Honor 9X Pro adịghị nwere ngwa anya mbugharị dị ka ụfọdụ ndị na-adịbeghị anya elu-ọgwụgwụ smartphones. Ma ngwanrọ ngwanrọ iji nye mbugharị dijitalụ nke juru anyị anya. Anyị na-ahụ otu esi elekwasị anya otu ebumnobi na-enweghị iji mbugharị, ya na 50% yana 100%, anyị na-enweta ezigbo nsonaazụ ọma, na ezi uche na-efunahụ nkọwa na ogo.
Foto nwere mbugharị 50%
Na ogbugba juputara nuances, shapes, colors and textures, anyi huru otu igwefoto Honor 9X Pro na-agbachitere onwe ya karia ihe obula. Ezi agba, omimi, na nkọwapụta ọdịdị nke ọma.
Foto dị ala
Na foto a, ewere na obere eke ìhè, mgbe anyanwụ dara awa mgbe ọ malitere itiri, iji nweta agba, igwefoto ekele AI nwere ike mụta nwa ha dị n'ezie.
Ngwa igwefoto dị nsọpụrụ, dị mma ma na arụ ọrụ
Ọzọkwa ahụmahụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ foto niile, n'ime ohere nke ngwaọrụ dị na nke a na ọnụahịa a, ọ na-eju afọ. Ọ bụghị nke ukwuu na interface nke ngwa igwefoto. Anyị na-achọta a dịtụ nkiti ngwa, adịghị ahụ anya ma na-enweghị obi ụtọ. Anyị ga-emetụ ọtụtụ ugboro iji nweta nhazi a na-akpọ "pro" ebe ọ bụrụ na anyị nwere ntọala dị elu.
Ma maka arụmọrụ anyị masịrị ya, anyị hụrụ nhọrọ nke snapshots na foto customization nke ndị nrụpụta ndị ọzọ enweghị. Otu ihe atụ bụ mode akpọrọ "Ihe osise na ìhè" na na anyị nwere ike ịse foto na-egbu egbu ụzọ ọkụ, graffiti ọkụ ma ọ bụ ihe oyiyi na-akpụ akpụ.
Na mgbakwunye, dị ka mgbakwunye anyị na-ahụkwa ngwa ngwa ma ọ bụ vidiyo ngwa ngwa. Foto panorama, na-akpụ akpụ foto ma ọ bụ HDR. Gụ ụzọ mkpirisi maka abalị foto, na nnukwu oghere hiwere isi, ọnọdụ eserese na foto ọkọlọtọ ma ọ bụ vidiyo. Na Eserese eserese, otu n'ime ihe ndị kachasị achọ taa na-enye ezigbo nsonaazụ ọma, nke na-akawanye njọ na ọnọdụ ọkụ dara ogbenye.
Ọ bụrụ na igwefoto metụtara gị na ike gwụrụ gị ịhụ na foto nke ekwentị gị ugbu a adịghị "tụọ", ama a bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị. Will ga-enwe igwefoto na-ejikwa nke ọma n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla.
? Ọ bụrụ na ịnweghị ike ichere ọzọ ebe a ị nwere ike ịzụta Honor 9X Pro na ya ukara website.
Ndị a na-akpọ Achilles ya ikiri ụkwụ
Anyị na-agụta ọnụ na post na Honor 9X Pro na-apụta ìhè n'ihe niile. Akụkụ ndị anyị juru anyị anya nke ọma dịka nke ahụ na ihuenyo, ma ọ bụ foto. Ma kemgbe ihe ijuanya, na nke a ka njọ, batrị nke Honor kpebiri ịkwado 9X Pro ya. Ọ bụ ọbụna ihe ijuanya na na ngwaọrụ buru ibu ma nwee nnukwu ihuenyo, batrị ahụ dị mkpụmkpụ.
The Honor 9X Pro nwere batrị 4.000 mAh, nke dị n'okpuru ihe anyị na-ahụ n'oge na-adịbeghị anya na smartphones nke otu ụdị ahụ, dị ka nke anyị nwere ike ịnwale n'oge na-adịbeghị anya, Xiaomi Remi Note 9 Pro, nke nwere batrị 5.020 mAh. Ọ bụ eziokwu na ibu batrị na-eme ka ngwaọrụ dịkwuo arọ, mana ọtụtụ ndị ọrụ dị njikere ịchụ àjà maka nnwere onwe.
Anyị ekwuola okwu n'ọtụtụ oge na batrị anaghị etolite n'otu ọsọ dị ka ihe ndị ọzọ nke ekwentị. Ngwaọrụ ndị a enwetala na arụmọrụ ike, na-enyocha nha nke a yana mkpebi ha na-enye, ha anaghị enyere mAh aka ịgbatị karịa ihe ha nwere ike ịnye.
Nche na akpọchi
O yiri ka ọ bụ eziokwu ọ na-aghọkarị omume ịchọta akara mkpisiaka n'akụkụ ngwaọrụ ahụ. A hapụrụ ndị na-agụ akara mkpịsị aka azụ iji jiri mkpịsị aka na-amata anyị? Enweela ọtụtụ ndị nrụpụta ahọrọla itinye ndị na-agụ mkpịsị aka ha n'otu akụkụ, na-ahapụ azụ ngwaọrụ ndị ahụ n'efu. Ka ọ were ugbu a, ọ bụ mkpịsị aka aka, site na itinye aka ergonomic, onye na-amata anyị iji mepee ekwentị ahụ.
The Honor 9X Pro, na mgbakwunye na ịnwe akara mkpisiaka na ebe ọhụụ ya, a kwadebere ya na teknụzụ nke ihu. Nsonaazụ njirimara onye na-agụ akara mkpịsị aka ama ama ma ọ bara uru. Anyị nwekwara ike mejuputa ike nche site na-agbakwunye koodu mmeghe.
Cingtụkwasị onye na-agụ akara mkpisi aka na ebe ọzọ na-abụghị azụ na-eme ka ngwaọrụ rite uru na ihe “nhicha”. Karịsịa ma ọ bụrụ n'otu oge ahụ, mkpisiaka agụ ya onwe ya na-eme dị ka mkpọchi bọtịnụ. Ọ dị mma ịnwe bọtịnụ na ihe ndị na-enye ọrụ "2x1".
Nsọpụrụ = Huawei = Enweghị Google
Otu n'ime ọghọm na a priori anyị na-ahụ na Honor abịa na erughị eru anyị hụrụ na sistemụ nrụọrụ gị. Ọ bụghị gbasara arụmọrụ nke otu, nke dị anya na ya, mbipute gam akporo, gụnyere akwa nhazi nke kpochapụwo ya EMUI, ọ na-asọ n'ụzọ magburu onwe ya na ekwentị. Ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma, mana anyị enweghị ọrụ Google.
Eziokwu bụ na ọ dị oke dị nnọọ iche ịmalite ngwaọrụ na-enweghị nyochaa na akaụntụ Google anyị. Enwere ike ịkatọ ụlọ ọrụ nke nnukwu "G" maka ọtụtụ ihe, omume ọjọọ, njikwa aghụghọ nke nchekwa nke data anyị. Ma ọ dịghị onye nwere ike ịgọnahụ uru nke ngwa ha na ndi di nfe na eme anyi otutu oru.
Nke a bụ ihe anyị na-agaghị agbaghara ruo mgbe anyị gafere ngwaọrụ nke na-enweghị ha, dị ka ọ na-eme na Honor a. Eziokwu dị mfe nke enweghị foto na ndabara na Google Photos App iji nwee ike ịlele ma ọ bụ dezie ha na kọmputa ahụ bụrịrị ihe ijuanya. Dịka ọmụmaatụ, ọ siri ike, dịka ọmụmaatụ, inwe ike ịfefe foto gị na kọmputa gị ma ọ bụrụ na ịnweghị Bluetooth ma ọ bụ njikọta Huawei.
Ma anyị kwesịrị ịghọta nke ahụ Huawei emeela ezigbo ọrụ na ngwa ngwa ya ma anyị nwere ihe niile anyị nwere ike ịchọ. Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị dabere na Google iji rụọ ọrụ gị kwa ụbọchị ma ọ bụ na ị na-eji ụfọdụ ngwa ọrụ ya oge niile, ị gaghị enwe nhọrọ karịa ịwụnye Playlọ Ahịa Google Play site na APK.
Sọpụrụ Isiokwu Nkọwapụta 9X Pro
Nlereanya 9X Pro
Ihuenyo LCD / IPS 6.59 sentimita asatọ
Mkpebi DH zuru + 2340 x 1080
Njupụta 391 ppp
N'ihu panel bi na pasent 92%
Nhazi ihuenyo 19.5: 9
Nhazi Kirin 810 Octa Core
Oghere kaadị ebe nchekwa EE Micro SD
Igwefoto foto anya atọ
Main anya 48 megapixel Sony IMX582 Exmor RS pịnye CMOS.
Wide n'akuku anya 8 megapixels nwere mgbado anya nke 2.4.
Anya eserese omimi mmetụta na 2 megapixel mkpebi
Ngwa ngwa ngwa EE 10 W
Usoro njikwa Android 10 Q
Nhazi nke onwe emui 9.1.1
Ibu ibu 206 g
Akụkụ X x 77.2 163.1 8.8 mm
Ahịa 269.90 €
Linkzụta njikọ Sọpụrụ 9X Pro
Uru na ọghọm nke Honor 9X Pro
La ihuenyo mkpebi na ya tamaño mee ka ọ bụrụ ngwaọrụ dị mma iji nwee ọ enjoyụ na ọdịnaya ọdịnaya ọtụtụ.
Ike gị 256GB nchekwa Ọ bụ mgbakwunye agbakwunyere nke na-eme ka anyị ghara ichegbu onwe anyị banyere ebe nchekwa.
na igwefotoHa niile na-arụpụta ezigbo nsonaazụ n'ihe niile.
La ike batrị Ọ dabara na njikọ nke ngwaọrụ ndị ọzọ.
La gbapụta igwefoto, nke maka ọtụtụ bụ ihe dị mma, enwere ike mebie ma ọ bụrụ na ekwentị jupụtara na uzuzu ma ọ bụ ájá, ghara ịkọwa oge ọzọ ọ na-ewe iji rụọ ọrụ ma e jiri ya tụnyere nke mbụ.
Gbapụta Igwefoto Igwefoto
Sọpụrụ 9X Pro
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Sọpụrụ 9X Pro nyochaa
Ọgọstụ 13 bụ ụbọchị mgbede nke EVE